I-Digby: Ukushayela Ukuhweba Kwasekhaya ngezinhlelo zokusebenza zeselula | Martech Zone
I-Digby: Ukushayela Ukuhweba Kwendawo ngezinhlelo zokusebenza zeselula
NgoLwesithathu, Januwari 2, 2013 Douglas Karr
Kuyinkolelo yami ukuthi lo mbhalo usodongeni futhi izindawo zokuthengisa manje zenza utshalomali oludingekayo kumasu weselula. Iselula isiphenduke ukhiye ocwaningweni lwabathengi nokuziphatha kokuthenga. Kuhlanganiswe nokwamukelwa okukhulu kwama-Smartphones, akukho kungabaza okuncane ngomthelela weselula ozoba nawo eminyakeni ezayo. I-Digby inikeza i-SDK lapho uhlelo lokusebenza lweselula lomthengisi lungafaka kalula geofencing ) analytics namakhono wokumaketha.
Ngokusebenzisa i-Digby Localpoint ™ Mobile Platform, equkethe i-Analytics, Outreach, Venue, ne-Storefront, i-Digby isebenzisa ubuchwepheshe obususelwa endaweni ukuvumela ama-brand ukuthi acindezele imiyalezo esebenzayo, eqondisiwe yendawo futhi ahehe, abe nomthelela, futhi abe nobudlelwano namakhasimende abo kuyo yonke indawo zonke iziteshi - konke ngokusebenzisa ulwazi lwabo lweselula olunophawu.
I-Digby Localpoint ™ Ipulatifomu Yeselula
I-Localpoint Outreach - Abathengi kungaba yizinyathelo kude nezivumelwano zakho ezinhle futhi bangaze bazi. Kungani ubavumela ukuba badlule lapho ungakwazi khona manjalo futhi uqobo ukufinyelela kubo bese ubadonsela esitolo ngokuxhumana nabo ngqo ngohlelo lwakho lokusebenza lweselula? I-Digby Localpoint Outreach ikusiza ukuthi wenze lokho kuxhumana ne-suite enamandla yamakhono wokumaketha owazi indawo aklanyelwe kuphela imikhiqizo.
Indawo Yendawo - Abasebenzisi abanikwe amandla yi-Smartphone manje sebekwazi ukubheka amanani ezincintisana nabo ngenkathi behamba emigwaqweni yakho. Qalisa ukucasula ngokunikeza ngesipiliyoni sakho seselula esishayela inani, ukuzibandakanya nekhadi lokugcina lokwethembeka. Indawo yeDigby Localpoint ikuvumela ukuthi ube nokuzibandakanya esitolo esitolo ngamathuluzi anamandla okwazisa, ukusiza, nokukhuthaza abathengi abaxhunyiwe lapho kubaluleke kakhulu futhi kuphi.
Izibalo ze-Localpoint - Imali engaphezu kuka-90% yemali yokuthengisa ivela esitolo kepha kuncane kakhulu manje okuphathelene nekhasimende analytics esitolo. I-Digby Localpoint Analytics ikuvumela ukuthi uthole isitayela sewebhu analytics ngezindawo zakho ezibonakalayo nedatha eyigugu yokuthi amakhasimende akho avakashela kanjani futhi nini esitolo sakho, okuvumela ukuthi ufunde kabanzi ngawo ukuze uwasebenzise kangcono.
Izitolo Zasendaweni - Amakhasimende afuna ukuthi ukusesha kwakho okunophawu, ukubhekabheka nokuthenga isipiliyoni seselula kujabulise, kube lula futhi kube yigugu kokunikezwayo nokuqukethwe. I-Digby Localpoint Storefront ikuvumela ukuthi wakhe isipiliyoni sokuthenga esiyingqayizivele, esivunyelwe ukuhweba futhi ugqozi futhi wazise ikhasimende lakho ngohlelo lwakho lokusebenza lweselula olunophawu kanye newebhusayithi eyenziwe kahle yeselula.
Tags: androidI-digbyindawo yendawo ye-digbygeofencingiphonemobile wendawoindawo uyazianalytics mobilemobile sdk
Hlunga Umsindo Wakho Komphakathi nge-Cloze